Programming လေ့လာဖို့ လမ်းကြောင်း - MYSTERY ZILLION
Programming လေ့လာဖို့ လမ်းကြောင်း
October 2014 edited November 2014 in Programming
အရင်တုန်းက Web Route ဆိုပြီး image လေး တစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Web Development လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကို သွားရင် ဘာတွေ သိမယ်။ ဘာတွေ လေ့လာဖို့ လိုတယ် စတာတွေ အတွက် ပုံလေး တစ်ပုံ နဲ့ Mind Map လေး ဆွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
အတော်လေးကို ကြာခဲ့ပြီမို့ ပြန်ပြီး update လုပ်ထားပြီးတော့ Programming အခြေခံကနေ Web , Mobile စတဲ့ development ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။
လိုအပ်တာတွေကို ဆွေးနွေး အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
http://cl.ly/YKe0/Route03112014.pdf [updated on 03.11.14]
Thanked by6kaungkhantmintun Morris DeathWings Miracle kaunghtetaungmgn aungmyatk_o
October 2014 Moderators
Thanked by2K kaungkhantmintun
Guard(Ruby), Grunt(JS), Gulp(JS) တို့ကို Build System ဆိုပြီး ထည့်လိုက်မယ်။
ionic , Onsenui တို့က mobile UI framework တွေ မဟုတ်လား ? Front End မှာ Mobile Framework ဆိုတာ ထပ်ခွဲပြီး ဖြည့်လိုက်မယ်။
အင်း frontend ထဲက build system ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ နောက် node framework ထဲမှာ kraken.js ဆိုတာရှိဦးမယ်။ Paypal ကလူတွေထုတ်တာ ထင်တယ်
front end ပိုင်းမှာ package manager မှာ Bower ကို ထည့်ဖြည့်ရမယ်။
Yoeman ကတော့ ဘာမှန်း သေချာမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
@Morris‌ , version အသစ် ပြန်တင်ထားတယ်။ kraken.js က ဘယ် category ထဲမှာလို့ ပြောလို့ရလဲ ? Full-stack လား ?
Add Redis in Database
CSS ကို ထပ်ဖြည့်ဖို့ မေ့သွားတယ်
@thuyamyonyunt ကျွန်တော် သေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး နောက် version မှာ update လုပ်လိုက်မယ်။
Yeoman ကသိသလောက်တော့ scaffold လုပ်ပေးတဲ့ generator ပါပဲ။ ဘယ်ဟာနဲ့သုံးမလဲဆိုတာ မေးတယ်။ ဖြေပြီးရင် project structure ချပေးတယ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်း development လုပ်ရတာ ရှုပ်နေတာပဲ
@thuyamyonyunt‌ Windows Phone ထဲမှာတော့ HTML , JS ကို ထပ်ဖြည့်ထားတယ်။
CSS မှာ Stylus ထပ်ဖြည့်ထားတယ်။
Software Methodologies တွေမှာ Agile , Waterfall စတာလေးတွေ နည်းနည်း ဖြည့်ထားတယ်။
Node.js အောက်မှာ kraken.js ထပ်ဖြည့်ထားတယ်။
Yeoman ကတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ခေါင်းစဉ် နဲ့ ထည့်ရမှန်းကို မသိဘူး။
Thanked by 1 thuyamyonyunt
Update Package Manager for .NET , Python and Go
@saturngod ကျွန်တော်​ကတော့ Java သမား​ဆို​တော့ Java branch နဲ.ပါတ်​သတ်​တာ​လေး အကြံ​ပြု​ပါ​ရ​စေ ။ Framework တွေ​ကတော့ အသစ်⁠အသစ်​တွေ​လည်း အများ​ကြီး​ဆို​တော့ ဒါ​တွေ​ကို​တော့​မ​ပြော​လို​ပါ​ဘူး ။ ကျွန်တော် ပြော​လို​တာ​ကတော့ Framework ဆို​တဲ့ branch မှာ ဘာ Framework ကို​မှ မ​သုံး​ပဲ Java ရဲ. Standard ဖြစ်​တဲ့ EJB ဆို​တာ​တစ်​ခု​တည်း​နဲ. develop လုပ်​ကြ​တာ​က အများ​စု​မို.လို.ပါ။ ထို​နည်းတူ​ပဲ DataBase branch မှာ​လည်း Java ရဲ. ကိုယ်​ပိုင် DataBase Technology ဖြစ်​တဲ့ Oracle ကို ထပ်​ဖြည်.ဖို.နဲ. Standard (EJB) လို​မျိုး​တွေ​ကို run နိုင်​မယ့် Application Server ဖြစ်​တဲ့ WebLogic Server ကို​လည်း ထပ်​ထည်.စေ​လို​ပါ​တယ်။ Package Manager ဆို​တဲ့ branch ကို အခု​က Maven , Gradle နှစ်​ခုဖော်​ပြ​ထား​တာ​ကို​တွေ.ရ​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်​တို.ကတော့ အဲ့​တာ​တွေ​ကို Build Tools တွေ​လို. ခေါ်​ပါ​တယ်။ Ivy နဲ. Ant ကို​လည်း ထပ်​ထည်.စေ​လို​ပါ​တယ်။ အသုံး​များ​လို.ပါ။ ကျေးဇူးတင်​ပါ​တယ်။
@DeathWings , ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့်ပေးပါမယ်။